Kune mapurazi mazhinji emakwai kuAustralia, New Zealand, America, England, France, Canada nedzimwe nyika zhinji. Ehe, inoburitsa yakawanda yakawanda yemombe manyowa. Izvo zvakanaka zvigadzirwa zvekugadzirwa kwe organic fetiraiza. Sei? Hunhu hwemanyowa emakwai ndiyo yekutanga mune yekuchengeta zvipfuyo. Kusarudzwa kwemafuro emakwai mafufu, huswa hwakapfava, maruva uye mashizha egirini, ayo ari zvikamu zve nitrogen.
Manyowa matsva emakwai ane 0,46% yephosphorus uye 0.23% ye potasium, asi iyo senitrogen ine 0,66%. Yayo phosphorus ne potassium zvirimo zvakafanana nemamwe manyowa emhuka. Zvemukati nyaya zvirimo zvinosvika kusvika makumi matatu muzana, zvakapfuura iyo imwe mhuka yemanyowa. Nitrogen zvemukati zvakapetwa zvakapetwa zviri mune ndove yemombe. Naizvozvo, kana ikaiswa huwandu hwakaenzana hwemanyowa emakwai muvhu, kushanda kwefetiraiza kwakakwirira zvakanyanya kupfuura mamwe manyowa emhuka. Iyo fetiraiza mhedzisiro inokurumidza uye inokodzera kupfeka kwepamusoro, asi mushureyakaora kuvirisa kana granulation, zvikasadaro zviri nyore kupisa mbesa.
Makwai anopenya, asi kashoma kunwa mvura, saka mupfudze wemakwai wakaoma uye wakanaka. Huwandu hwetsvina zvakare diki kwazvo. Manyowa emakwai, sefetiraiza inopisa, ndeimwe yemanyowa emhuka pakati pemupfudze webhiza nendove yemombe. Mufudzi wemakwai une huturu hwakapfuma. Izvo zviri zviviri zviri nyore kuputsa kuita zvinovaka muviri zvinovaka muviri izvo zvinogona kutorwa, asi zvakare zvine michero yakaoma kuora. Naizvozvo, mupfudze wehwai organic fetiraiza mubatanidzwa wekukurumidza-kuita uye wepasi-unobata fetiraiza, inokodzera dzakasiyana siyana yekushandisa ivhu. Mufudze wemakwai nebio-fetiraiza chinovira bhakitiriya composting kuvirisa, uye mushure mekupwanya kwehuswa, mabhakitiriya akaomarara mabhakitiriya anomutsa zvakaenzana, uyezve neaerobic, anaerobic Fermentation kuti ibudirire manyowa.
Izvo zvemukati makemikari marara emakwai aive 24% - 27%, iyo nitrogen yaive 0.7% - 0.8%, iyo phosphorus yaive 0.45% - 0.6%, potasium yaive 0.3% - 0.6%, zvirimo organic chinhu mumakwai 5%, senitrogen yezvinhu 1.3% kusvika 1.4%, shoma kwazvo phosphorus, potasium yakafuma kwazvo, inosvika 2.1% kusvika 2.3%.
Makwai Mufudze Kompositi / Fermentation Maitiro:
1. Sanganisa mupfudze wemakwai uye chidimbu chehupfu hwemashanga. Huwandu hwesadza hupfu zvinoenderana nehunhu hwemakwai hunyoro. Iyo general composting / kuvirisa inoda 45% yehunyoro.
2. Wedzerai 3 kg yebhakitiriya yakaoma kunzwisisa kune 1 tani yezvipfuwo zvemakwai kana 1.5 tani yemanyowa emakwai matsva. Mushure mekusanganisa mabhakitiriya pachiyero che1: 300, unogona kunyatsomwaya mumurwi wezvinhu zvemakwai. Wedzera zvakaenzana zviyo zvezviyo, mashanga echibage, huswa hwakaoma, nezvimwe.
3. Ichave yakagadzirirwa neakanaka fetiraiza chisanganiso kumutsa iyo organic zvigadzirwa. Kusanganisa kunofanirwa kuve yunifomu, kwete kusiya chivharo.
4. Mushure mekusanganisa zvese zvakasvibirira, unogona kugadzira Window compost murwi. Iyo murwi upamhi ndeye 2.0-3.0 m, kukwirira kwe 1.5-2.0 m. Kana iri urefu, anopfuura mashanu m ari nani. Kana tembiricha yapfuura 55 ℃, unogona kushandisamanyowa wemuchinjiko Turner muchina kuishandura.
Cherechedzai: pane zvimwe zvinhu zvinoenderana neyako gwai mupfudze kugadzira, senge tembiricha, C / N chiyero, pH kukosha, oxygen uye kusimbiswa, nezvimwe.
5. Iyo manyowa ichave mazuva matatu tembiricha ichikwira, mazuva mashanu asina hwema, mazuva gumi nemana akasununguka, mazuva gumi nemaviri anonhuwirira, mazuva gumi nemashanu pakuora.
a. Pazuva rechitatu, tosi ye compost inokwira kusvika 60 ℃ - 80 ℃, ichiuraya E. coli, mazai nezvimwewo zvirwere zvezvirimwa nezvipembenene.
b. Pazuva rechishanu, hwema hwemafuro emakwai hunobviswa.
c. Pazuva rechipfumbamwe, composting inova yakasununguka uye yakaoma, yakafukidzwa nechena hyphae.
d. Pazuva regumi nemaviri rekutanga, rinogadzira waini inonaka;
e. Pazuva regumi neshanu, mufudze wemakwai unobva wakura.
Paunogadzira mupfudze wemakwai wakaora, unogona kuutengesa kana kuushandisa mubindu rako, purazi, munda wemichero, nezvimwewo. Kana uchida kugadzira manyowa emanyowa kana zvimedu, mupfudze yakadzika organic fetiraiza kugadzirwa.
Makwai Mufudze Commerce Organic Granules Kugadzira
Mushure mekugadzira manyowa, iyo organic fetiraiza mbishi zvinhu zvinotumirwa mu Semi-nyoro zvinhu crusher kupwanya. Uye wobva wawedzera zvimwe zvinhu pakuisa manyowa (pure nitrogen, phosphorus pentoxide, potasium chloride, ammonium chloride, nezvimwewo) kusangana nezvinodiwa zvinovaka muviri, wosanganisa zvinhu zvacho. Shandisanyowani mhando organic fetiraiza granulator kugadzira zvinhu zvakagadzirwa kuita zvidimbu. Dry uye utonhorere pasi mairi. Shandisascreener muchina kugadzira mapundu akaenzana uye asina kukwana. Zvigadzirwa zvinokodzera zvinogona kupakurwa zvakananga neotomatiki kurongedza muchina uye granules dzisina kukodzera dzichadzoserwa ku crusher kuti iite zvakare granulation.
Iyo yese gwai mupfudze wekugadzira fetiraiza maitiro anogona kuganhurwa kuita composting- kupwanya- kusanganisa- granulating- kuomesa- kutonhodza- kuongorora-kupaka.
Kune akasiyana mhando ye organic fetiraiza yekugadzira mutsara (kubva padiki kusvika padanho hombe) yesarudzo yako.
Makwai Mufudze Organic Fetiraiza Kushanda
1. Makwai manyowa manyowa manyowa kuora inononoka, saka inokodzera fetiraiza yepasi. Iine kuwedzera goho maitiro pazvirimwa. Zvinenge zvirinani pamwe nekubatanidzwa kweiyo inopisa organic fetiraiza. Inoiswa kune jecha uye zvakare inonamira ivhu, inogona kuwana kubereka kuvandudza, asi zvakare kugadzirisa ivhu enzyme chiitiko.
2. Organic fetiraiza ine zvinovaka muviri zvakasiyana zvinodiwa kunatsiridza mhando yezvirimwa zvigadzirwa, kuchengetedza zvinovaka muviri zvinodiwa.
3. Organic fetiraiza inobatsira ivhu metabolism, inovandudza ivhu rezvinhu zviitiko, chimiro uye zvinovaka muviri.
4. Inosimudzira kushomeka kwekusanaya kwemvura kwezvirimwa, kutonhora kutonhora, desalination uye kusagadzikana kwemunyu uye kusagadzikana kwezvirwere.